Mogadishu Journal » 2018 » October » 30
Mjournal :-Kulan ay maanta Magaalada Baydhabo ku yeesheen Gudiga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayey ku go’aamiyeen qaabka ay u dhici laheyd doorashada maamulkaasi. Gudiga Doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo bandhigay hab raaca loo dooran lahaa...
A delegation led by Somalia’s Post, Telecom and Technology minister is attending the 20th Plenipotentiary Conference (PP-18) of the International Telecommunication Union (ITU), which kicked off at the Dubai World Trade Center in Dubai, UAE. The Plenipotentiary Conference is the...
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa si aad ah kaga carooday in guddoomiye ku xigeenka kooxda ee Ed Woodward uu baajiyo waqtigii lagu madalsanaa in laga arrinsado miisaaniyadda suuqa kala iibsiga ee bisha January. Mourinho ayaa ka cabanaya in aysan si...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Somaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xariga ka jaray Xarun labaad oo loo dhisay Wasaarada Maaliyada Dowlada Federalka Soomaaliya. Dhismaha xaruntan oo ay gacan ka geysatay dowlada Sweden ayaa munaasbadii xarigga loogaga jarayay waxaa ka...
Mareykanka oo war ka soo saaray doorashada Koonfur Galbeed
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay taageereyso doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee 17-ka bisha soo socota November ka dhaceysa magaalada Baydhabo. Wuxuu sheegay Mareykanka inuu soo dhaweynayo inuu soo dhaweynayo guddiga doorashada...
Faah faahin dheeraad ah : Shan ruux oo lagu dilay dulleedka Muqdisho
Mjournal :-Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan rasaas lagu furay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay duleedka magaalada Muqdisho. Ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhimatay iyadoo saddex kamid ah ay ahaayeen walaalo kadib markii gaari ay wateen dabley hubeysan ay rasaas...
Mjournal :-Ciidamada Ammaanka maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay Askar ka tirsan Ciidanka Puntland,kuwaasoo wiil arday ah xalay Ku dilay Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka Puntland. Dilka ayaa yimid ka dib markii Ciidamada ay taleefonnadii ka furteen wiilka la dilay...
Shaqaallaha dowladda qaarkood oo aan mushaar qaadan 9 Bilood
Mjournal :-Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu sheegay in aan wax mushaar ah aysan qaadan mudo sagaal bilood ah shaqaalaha safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay caalamka qaarkood. Waxa uu sheegay wasiir Cawad in...
Sheekh Shaakir oo taageeray gogoshii uu fidiyay Madaxweyne Farmaajo
Mjournal :-Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa taageeray gogoshii Madaxweyne Farmaajo u fidiyay maamul goboleedyada, si loo dhammeeyo khilaafka ka dhex taagan dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada. War saxaafadeed xalay ka soo baxay Xafiiska...